५० बर्ष पहिलेनै हावा पंखा घुमाएथ्यौ, हुरि बतास झोक्कामा ६ मैनामै गुमाएथ्यौ ! उर्जा बिकल्पको खोज्ने विश्व डन्का अहिलेको, हावा उर्जा पैदा गर्ने तिम्रो सपना उहिलेको ! कति गए कति बाँकी काल पर्खेको भ...
कर आतंक: समस्या र समाधान
काठमाडौं । मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । संघीयताको जन्म जे जसरी भएपनि संघीयता वर्तमान संविधानले स्वीकार गरिसकेको छ । संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहका सरकार मुलुकमा स्थापित भइस...
‘गाउँगाउँमा सिंह, घर–घरमा करको बिल’
‘अब घरदैलोमा सरकार, सबै सेवा सुविधा आँगनमा’ स्थानियतहको चुनाव हुने क्रममा भएको चुनाव सकिएको केही समय सम्म यस्तै सुनिथ्यो । राजनीतिदलका नेताहरुले स्थानिय सरकारलाई सिंहदरबार गाउँमा गएको ब्याख्या गरे ना...
नेकपाले मन्त्री, मेयर अध्यक्षलाई पार्टीको जिम्मेवारी नदिने
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले मन्त्री, मेयर, उपमेयर र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको जिम्मेवारी खोसेको छ । नेकपाको सचिवालय बैठकले जिम्मेवारीमा रहेकालाई जिम्मेवारी विहीन बनाएको छ भने न...
कोही कसैले भन्ने गर्छन् – तिम्रो मोल अनमोल छ तर, मैले थाहा पाएअनुसार– मेरो मोल विहान–बेलुका एक डबका झोल छ । कतै जान्छु गुण्डागर्दी र विचौलिया बन्छु– यही त साथी तिमी र ममा फरक यही छ । सरकारी ...
केन्द्रको आयोजनामा बजेट सक्न स्थानीय सरकारको डोजर
काठमाडौं । विकासका नाममा पहाडमा चलिरहेका डोजरले जथाभावी बाटो खन्दा विकाससँगै विनास पनि देखिन थालेको छ । विना मापदण्ड प्राविधिक अध्यनविना बाटो खन्ने काम भइरहेको छ । अछामको पञ्चदेवल नगरपालिका वडा नम्बर...
काठमाडौं । एक महिनाअघि नै बनिसक्नुपर्ने संसदीय समितिहरु अहिलेसम्म पनि बन्न सकेका छैनन । मिनी संसद मानिने संसदीय समितिहरु नबन्दा संसदीय अभ्यास कमजोर भएको छ । सरकारका काम कारवाहीको निगरानी गरी जनताप्रति...
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समसामयिक विषयमा धारणा राखे । बिहीबार अबेर सम्पन्न बैठकमा प्रचण्डले केही नेताहरूको प्रच...
बाजुरा । दुर्गम जिल्लाका विद्यार्थी शैक्षिक सामाग्री र भौतिक पूर्वाधारको अभावमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट बञ्चित भएको समाचार बेला–बेलामा आउने गरेको छ । दुर्गम हिमाली जिल्ला बाजुराबासीले अव मास्टर डिग्...
काठमाडौं । नाकाबन्दी पछि नेपाल आइपुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले के बोल्लान् भन्ने निकै चासो थियो । नाकाबन्दीको सबैभन्दा ठूलो चपेटामा परेको मधेसमा नै उनले सम्वोधन गर्ने भएपछि त्यससँग जोडेर...
प्रदेश नम्बर २ को सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई गर्ने अभिनन्दको भाषामा केन्द्र सरकारको निर्देशन उल्लंघन हुने भएको छ । मोदीलाई जनकपुरमा हुने अभिनन्दनमा हिन्दीसहित चारै भाषा नै प्रयोग हु...